Iyo yekubira iyo yakarwisa iyo Linux Mint portal inotsanangura maitirwo azvo | Linux Vakapindwa muropa
Iyo yekubira iyo yakarova iyo Linux Mint portal inotsanangura maitirwo azvo
Isu tatozivisa mune ino blog kuti kwaivepo yakarwisa Linux Mint seva kutsiva ISO mifananidzo yekuparadzirwa kwakakurumbira kweLinux nedzimwe dzakagadziriswa idzo pirate yakanga yagadzira. Nekudaro, vese avo vakadhinda ISO yeLinux Mint kugovera vachange vaisa pamushini wavo vhezheni isiri yepakutanga uye yakadzvanywa nayo. Parizvino kurwisa kwacho kwaizivikanwa asi munhu akaita basa anga asingazivikanwe, ikozvino uyo anorwisa anozivikanwa uyo akatotsanangura kuti akazviita sei.
Kupfuurirazve, iyo yekubavha inoti haina kungobata iyo ISO mifananidzo munzvimbo yekurodha yeiyo yepamutemo Linux Mint portal, asi zvakare zvimwe zvikamu zvakaita semaforamu, kuve nekukwanisa kuve nemazita emazita uye mapassword evose vakanyoreswa. Chimwe chinhu chiri chakakomba chakakomba chengetedzo chikanganiso. Kuva nevashandisi uye mapassword kubva kuRegistry muforamu kunogona kunge kusiri iko kwakaipisisa, asi kugona kugadzirisa iyo ISOs kuti vashandisi vatore kurodha distros nechinangwa chimwe chete (kuisa backdoor kana backdoor kuti uwane iyo yakakuvadzwa komputa paunoda.).
Iye munhu anokonzeresa izvi, rega ndisamuti "hacker", sezvo "hacker" chiri chimwe chinhu, ndiyo hacker kana cybercriminal achizviti Runyararo. Mazuva matatu mushure mekurwiswa kwake akazviratidza, achitaurirawo kuti akakwanisa sei kutora maseva eLinux Mint. Chinhu chakabata vazhinji, nekuti Linux Mint ndeimwe yeDebian-based distros ayo anonyanya kushandiswa, kuseri kweWemasimbaose Ubuntu. Ndokunge, haisi distro isingawanzo shandiswa vashoma ...
Asi Runyararo haana kuratidza kana kumeso kana kuzivikanwaZvinongozivikanwa chete kuti anogara kuEurope uye zita rake munyika yepasi. Akataura zvakare kuti haazi weboka rinozivikanwa revapirati, anoita ega. Uye zvese zvakatanga paakange achi "famba-famba neLinux Mint seva" muna Ndira uye akasangana nenjodzi iyo yaimubvumidza iye kuti awane iyo webhusaiti admin admin pani. Uye mazuva mashoma gare gare, kusagadzikana kwanga kusati kwagadziriswa, saka akapinda mukati akasarudza kuumbiridza Linux Mint ISO yake nekunze kwekunze uye nekuita kuti munhu wese atore mufananidzo uyu kubva kumagirazi ma link aakaisa.
Iyo ISO yakaiswa kune yeBulgaria faira server. Pamusoro pezvo, Runyararo anokukurudzira kuti uongorore musuwo wekumashure sezvo usina kunyanya kuomarara uye iri rakavhurika sosi. Saka avo vanokanganiswa vatove nevaraidzo ... Ehezve iyo MD5 siginecha yaive zvakare yakasiyaniswa nerunyararo kuti iwirirane neiyo yeiyo yakagadziridzwa ISO uye nekudaro ichisiya avo vakaikopa vega. Chimwe chinhu chinotitungamira kuti tifunge kana izvo zvatinotora zvisina njodzi kunyangwe zviine chokwadi chehuwandu hweiyo MD5 hash (zvakare, vazhinji havatomboitarisa mushure mekurodha pasi).
Iyo dhatabhesi yemaforamu matanda yewebsite yeLinux Mint yakabiwa kaviri uye nekudaro mushandisi data rakakanganiswa. Asi Runyararo harumire ipapo, ravezve kurodha pasi rose kopi yeforamu, yekutanga muna Ndira 28 uye yechipiri munaFebruary 18, saka vese avo vakanyoreswa risati rasvika zuva rekupedzisira vane password yavo uye zita rekushandisa mumaoko pirate, kubvira kunyangwe zvaive zvakanyorwa, Runyararo anoti akagona kuvabvisa nyore nekutora mukana wekukanganisa kwePHPass iyo yaikwanisa mapassword epasaiti.
Y Runyararo akaisa zvese zvirimo kumusoro kutengesa: vashandisi, mapassword, maemail, zvinyorwa, nezvimwe. Pamusika mutema weiyo Yakadzika Webhu, yeinokwana 0.197 Bitcoin, ndokuti, $ 85. Pamusoro zvakachipa ... Kana iwe uchida kutarisa kana account yako yakanganisa, shanya RAKADHARA. Uye kana iwe wakadzikisa iyo ISO panguva ino, timu yako inozokanganiswa neyekunze kwekunze. Fomati uye gadza ISO nyowani inovimbwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Iyo yekubira iyo yakarova iyo Linux Mint portal inotsanangura maitirwo azvo
Mhoroi, uye nekutenda nekugovana iyi info.
Iko kune kukanganisa mune iyi link kune HaveIBeenPwned, sezvazvinoratidzika kunge haveibeedpwned (.com)
Uye izvozvo zvinokanganisa sei Albert Einstein pachake?
Pindura kuna assssa
Gibran barrera akadaro
Chokwadi chakazvimiririra!, Ini handifunge kudaro, kunyangwe maLinux Mint vagadziri vaita basa rakanakisa nekuparadzirwa uku, ndinotsunga kutaura kuti mune zvimwe zvinhu zvakatonyanya kukunda Ubuntu; Ini ndinotenda kuti pane kanopfuura kamwe chiitiko Mint yakaratidza kuti havana zvakakwana bhizinesi ruzivo, sezvo ivo vachinyanya kutsamira munharaunda yavo. Asi haina ruzivo rweDebian, ane makore anodarika makumi maviri ari mubhizinesi, uyo anoziva maitiro ekugadzira iyo organic chimiro, inoshanda kwazvo uye inoshanda, yenharaunda yayo.
Uye haina kukwanisa kuisa pakubudirira kwayo (kana Ubuntu ikaisa chinangwa kana chirongwa, ine zvivakwa zvakakwana kuti ikure), muMint zviri pachena kuti dhizaini yayo huru portal yakakosha kwazvo (ndingatoti yechinyakare) , izvo zvinoreva kuti kuigadzirisa uye kugadzirisa kwayo kunogona kusakwana. Zvigadzirwa nemasevhisi ayo ainowana haasvike kune imwe nzvimbo yechipiri munzvimbo yekugovera, uyezve hukama hwebhizinesi hwekumisikidza kugovera (Ubuntu adya keke iro uye hapana anomumisa, nezvibvumirano Hp, At & t , Bq, nezvimwe ...), muchidimbu ndinofunga kuti MInt haina kukwana mari. Izvi zviri pachena zvichakanganisa mhando, kuvimbika uye mukurumbira wekugovera uku.
Pindura kuna Gibran Barrera
Pakarepo vanofanirwa kushandura mapassword emaakaundi ese, pamwe vangazonyora maakaundi ... zvirokwazvo akasiya trace chaaida yaive mari yaakachengeta iyo yaizoita yakawanda purofiti inokuvadza linux mucherechedzo werusununguko uye kuenzanisa haina nyadzi.
Pindura kuna Evilhack
Ini zvekunyepedzera zvandiri, ini ndaive mumwe weavo vakangofunga kuti MD5 hash inofanirwa kufananidzwa neiyo ISO ... asi chokwadi akatochinja password kwatiri.
ZVINOTEVERA ndezvedu isu kutarisa kuti MD5 hashes ye "magirazi" ese anowirirana, anofanira kunge akafanana, zvikasadaro vakatibvuta zvakare.
Ndiri kutsvaga iyo PHPass kuti ndive nepfungwa yekuti inoshanda sei.
ZISO ZVAKADaro kuchengetedza maseva edu anogara achigadziridzwa kuti KUDZIDZA kusagadzikana.
Mamiriro ezvinhu seaya anogara achiuya anobatsira sekurova mbama pachiuno ...
Gentlemen, chii chinonzi shit kubva kumindi admins. Kukanganisa kwakakomba kwekuchengetedza mumaseva uko mifananidzo iri kudzokororwa: | (hapana kutaura).
PS: Wadii kumutumidza kuti hacker ???? uye kana pirate ??? musiyano uripi ???
Pindura kune phirus2
«PS: Wadii kumutumidza kuti hacker ???? uye kana pirate ??? mutsauko uripi ??? "
Wakaverenga here tsananguro yese yebavha ???? Zvinoita kuti ndiseke kuti vanhu vanoda kukupa zvinoreva kunaka kweshoko rekuba ... Iye murume ane hunyanzvi
Pindura kune phirus2phirus
Mvura yegungwa akadaro
Juas, ndingadai ndakazviita ndichipesana neiyo Ubuntu server…. zvirinani ivo vaigona kukanda vamwe fanboys XD
Pindura Kumvura Yegungwa
Heh, Ivo Backdoor Kupfuura Magirazi Ine mazana maviri eMirairo
Mhoroi, ndiChikunguru 29, 2016, mazuva mashoma apfuura, ini ndakaisa yangu nyowani Linux Mint distro, yekupedzisira, ini ndanga ndichiedza kumisikidza, kuisa, kugadzirisa nezvimwe nezvimwe vhidhiyo mutyairi kana mutyairi uye zvinoitika kuti ndinogona ' ndaneta nekupinda muNOMODESET modhi, ndarwadziwa nekuti ini ndaifarira iyo distro, kubvira 2008 ndanga ndichishandisa mamwe ma distros, ikozvino paPC yangu AMD Apu-HD6000D kubva 2011 haichandigamuchire kuisa aya madhiri sezvaakaita pamberi (iyo skrini inodzima mushure megubhu), aiwa ndinoziva kuti dambudziko richava rei; Iko kufambiswa kwekumisikidza kwazvino kuri seinotevera: Ini ndakakwanisa kuisa nekugadzirisa zvizere mashandiro ehurongwa nguva dzose nekupinda nomodeet, handikwanise kuwana mhinduro, ini ndinongoziva kuti sekutaura kweMint kuti inongogamuchira madhiraivhu eakavhurika anoenderana ne xorg uye unofanira tsvaga akaropafadzwa mutyairi wevhidhiyo, ndinofunga ndakatangazve yangu pc kanopfuura makumi mashanu nguva uye zvakadaro, kana mumwe munhu aine mupiro, unokosheswa, slds
Carlos Rivafhy monterroso akadaro
Ini ndinotenda kuti zvakakosha kuti uve neruzivo nezve kuchengetedzeka kwemaitiro ekushanda.
Pindura Carlos Rivafhy monterroso
Nyowani yeNvidia Linux Mutyairi Inounza Vulkan Tsigiro